Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » UNWTO mandrara ny asa fanaovan-gazety mitsikera ao amin'ny tsenan'ny fitsangatsanganana eran-tany
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • LGBTQ • fivoriana • Vaovao • People • Tourism • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • Etazonia Vaovao Vaovao • WTN
Ny asa fanaovan-gazety malalaka dia fototry ny fiarahamonina demokratika. Mitady sy mampiely vaovao, vaovao, hevitra, fanehoan-kevitra, ary hevitra izy io, ary mitana ny tompon’andraikitra ho tompon’andraikitra. Ny gazety dia manome sehatra ho an'ny feo marobe ho re. Eo amin'ny sehatra nasionaly, isam-paritra, ary eo an-toerana, dia ny mpiambina, mpikatroka, ary mpiaro ny vahoaka ary koa mpanabe, mpiala voly ary mpitantara amin'izao fotoana izao. Toa matahotra ny mpitondra fanjakana toy izany ny mpanao didy jadona, ary toy izany koa ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Pololikashvili.
UNWTO dia sampan-draharaha misahana ny Firenena Mikambana mifanaraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena.
Amin'izao fotoana izao, ny UNWTO dia manana Sekretera jeneraly tsy ara-dalàna mitantana ny fikambanana toy ny mpanao didy jadona. Araka ny fandikana ara-dalàna nataon'ilay mpisolovava izay nandray anjara tamin'ny famoronana politikan'ny UNWTO, fanodikodinana ihany no nametrahana an'i SG Zurab Pololikashvilihe. Tsy tokony ekena ny fifidianana voalohany amin’ny taona 2018.
Ny sekretera jeneraly dia nahavita nisoroka ny fanontaniana mitsikera rehetra hatramin'ny nitantanany ny fitondrana tamin'ny 1 janoary 2018. Androany dia ohatra iray momba ny halaviran'ny UNWTO hanakatona izay rehetra tsy mitovy hevitra amin'ny Sekretera Jeneraly.
Ny fihaonan'ny minisitra voalohany tao amin'ny World Travel Market nanomboka tamin'ny areti-mifindra, dia natao androany tany Londres tao amin'ny WTM World Stage ao amin'ny Excel Exhibition Center.
Toy ny mahazatra dia nivory ireo minisitra nifanakalo hevitra momba ireo olana mifandraika amin’ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany sy ny toetry ny indostria. Toy ny zava-nitranga hatramin'ny nananganana ny UNWTO ho sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana, anisan'ny mpanatrika ny mpanao gazety, saingy tsy afaka nametraka fanontaniana izy ireo. Taorian’ny dinika nataon’ny minisitra dia efa fanao ny fanaovana valandresaka ho an’ny mpanao gazety.
Niova izany rehetra izany tamin'ny 1 Janoary 2018, rehefa lasa niandraikitra ny fizahantany maneran-tany i Zurab Pololikashvili.
Tsy nisy intsony ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety tamin’ny seho ara-barotra lehibe na ny latabatry ny minisitra. Miseho amin'ny sary mihetsika fotsiny i Zurab ary manjavona.
Nandritra ny krizy COVID-19 manontolo, ny sekretera jeneralin'ny UNWTO dia nanalavitra ny gazety mitsikera rehetra. Androany tany Londres, ny sekretera jeneraly dia nandeha lavidavitra kokoa.
Mba hialana amin'ny fanehoan-kevitra na fanontaniana manakiana, dia niniany nanao lisitra mainty ireo mpanao gazety manoratra ho an'ny famoahana tahaka ity, eTurboNews.
Ny antony: eTurboNews Nanakiana ny Sekretera Jeneraly.
Mbola zava-dehibe kokoa amin'izao fotoana izao ny fialana amin'ny fiheverana ratsy, satria i Zurab Pololikashvili dia miato amin'ny fe-potoam-piasana faharoa, ary mila hamafisin'ny Fivoriambe ao Madrid ny fifidianana azy indray.
Nahazo ny tolo-kevitry ny Filankevitra mpanatanteraka fanindroany tamin'ny volana Janoary noho ny fanodinkodinana mafy, nahavita nanova ny toerana hanaovana ny fivoriambe ho Madrid, dia manome tombony mazava ho an'i Zurab ny fanamafisana indray ny fe-potoam-piasana faharoa ho an'ny UNWTO Sercterary General the faran’ity volana ity. Tsy mety aminy ny fanontaniana mitsikera.
Ny fivorian'ny minisitra androany tao amin'ny WTM London dia iray amin'ireo hetsika natrehiny voalohany hatramin'ny COVID. Nila nijery tsara herinandro izy talohan'ny fihainoana ny fanamafisana, saingy tsy afaka niatrika ny haino aman-jery izy.
Ny Hon. Nolavin'ny UNWTO i Najib Balala, Sekreteran'ny Fizahantany ho an'i Kenya, tamin'ny herinandro lasa taorian'ny nanasany ny fivoriambe hatao any Kenya fa tsy any Madrid.
Tany Londres androany ny minisitra Balala hanatrika ny fivorian’ny minisitra. Nilazana izy fa tsy misy seza intsony ho an’ny minisitra. Nandao ny hetsika izy minitra vitsy taorian'ny nidirany, nilaza eTurboNews mpitory, Juergen Steinmetz, izay niandry teo am-baravarana.
Ireo mpanao gazety rehetra nanatrika ny WTM dia nipetraka tamin'ny hetsika, afa-tsy eTurboNews nasehon'i Juergen Steinmetz. Natao persona non grata izy, tsy nahazo niditra an-tampony.
eTurboNews dia mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery ofisialy ho an'ny World Travel Market, saingy tsy nisy fiovana izany. eTurboNews norahonan'ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny Firenena Mikambana rehefa naka lahatsary momba ity tranga ity.
Toa mahomby ny UNWTO amin'ny fisorohana ny fanakianana avy amin'ny haino aman-jery mahazatra.
CNN, ohatra, dia mpiara-miombon'antoka amin'ny haino aman-jery ofisialy mahazo dolara an-tapitrisany amin'ny dokambarotra avy amin'ny toerana fizahan-tany. Natsangana ny CNN Task Group miaraka amin'ny UNWTO avy amin'i Anita Mendiratta, mpanolotsaina ambony ao amin'ny Sekretera Jeneraly. Ny tanjon'ny CNN Task Group dia ny hivarotra dokambarotra. Ity vondrona ity dia niforona taona maro lasa izay, tamin'ny voalohany eTurboNews ho mpiara-miasa. ary nisy izany eTurboNews izay nahita fifandirana mahaliana ary nandao ny vondrona miaraka amin'ny CNN, UNWTO, ICAO, ary IATA sisa.
Marcelo Risi, tompon'andraikitra amin'ny serasera ho an'ny UNWTO, dia tsy nety niresaka tamin'i Steinmetz. Hita nandositra niala tamin’ilay toe-javatra izy, ary nilaza hoe: “Juergen, sahirana aho.”
Tsy toe-javatra mahamenatra fotsiny izany, fa fanitsakitsahana mazava ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety sy fanavakavahana mazava.
Tsy nisolo tena an'i Steinmetz ihany eTurboNews, fa izy koa no Filohan'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany, fikambanana iraisam-pirenena momba ny fizahantany. Steinmetz dia mpikambana ao amin'ny birao mpanatanteraka ao amin'ny Birao Afrikana fizahan-tany.
Niezaka nanatona ny mpiara-manorina ny fihaonana an-tampon'ny ministera izy, ny World Travel and Tourism Council (WTTC), saingy nolavin'ny tompon'andraikitra teo am-baravarana hiresaka aminy ny tompon'andraikitra ao amin'ny WTTC, ary nilaza fa tsy fantany izay ijoroan'ny WTTC. ho an'ny.
Tao anatin’ny fihaonana fohy niarahana tamin’ny WTTC taorian’ny hetsika dia tsy nampahafantarina ireo mpitarika io fikambanana io ny zava-nitranga.
Jereo ny lahatsary iPhone mampiseho ny zava-misy: